सभामुख सापकोटाद्वारा ‘प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान गर्न सिफारिश गर्ने’ संकेत « रिपोर्टर्स नेपाल
सभामुख सापकोटाद्वारा ‘प्रतिनिधि सभाको बैठक आव्हान गर्न सिफारिश गर्ने’ संकेत
काठमाडौं, १३ जेठ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने संकेत गरेका छन् । उनले आज कानुन व्यवसायीहरुसँगको परामर्शपछि असाधारण निर्णय लिनसक्ने भन्दै त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
सभामुखलाई कानुविद्हरुले भूमिका बढाउन सुझाव दिए । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सभामुखलाई संसद अधिवेशन डाक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सुझाव समेत दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, डा. भीमार्जुन आचार्य, रमण श्रेष्ठलगायत परामर्शमा सहभागी थिए । उनीहरुले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सभामुखको महत्वपूर्ण भूमिकाको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए ।
कानुनका जानकारहरुको कुरा सुनेपछि सभामुख सापकोटाले असाधारण निर्णय लिने बताए । उनले भने,‘देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्रका लागि जनताले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यो भनेको असाधारण रुपमा बढ्ने हो ।’ उनले दलहरुसँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्ने समेत बताए । Photo By: Mukunda Kalikote/ReportersNepal
संकटमा फस्दै कांग्रेसः न महाधिवेशन न सरकार विस्तार
काठमाडौं, साउन २२ । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४औं महाधिवेशन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न असफल बनेको
‘ओली विश्वास गर्न लायक नहुँदा एकता प्रक्रिया धकेलियो’
काठमाडौं, साउन २२ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विश्वास